स्प्राइट रिफ्रेस बनायो, रिचार्ज गरायो योजनामा एक दिनमा अठार हजार भन्दा बढी विजेताहरु ! | suryakhabar.com
Home आर्थिक स्प्राइट रिफ्रेस बनायो, रिचार्ज गरायो योजनामा एक दिनमा अठार हजार भन्दा बढी विजेताहरु !
स्प्राइट रिफ्रेस बनायो, रिचार्ज गरायो योजनामा एक दिनमा अठार हजार भन्दा बढी विजेताहरु !
on: August 20, 2018 In: आर्थिकTags: No Comments
काठमाडौं । स्प्राइट रिफ्रेश बनायो रिर्चाज गरायो योजनामा भव्य रुपमा संचलान भईरहेको छ । यस योजनामा प्रत्येक दिन १० हजार भन्दा बढी उपोभोक्तहरुको सहभागी हुँदै आईरहेका छन् । यस योजना अन्तर्गत गत हफ्तामा एक दिनमै विजेताहरुको संख्या १८००० जना भन्दा बढी पुगेको छ । साथै गएको हफ्ता सम्म यो योजनामा १ लाख ८० हजार भन्दा बढी भाग्यमानी बिजेताहरुले २३ लाख बराबरको रिचार्ज जितिसकेका छन् ।
रिफ्रेश एण्ड रिर्चाज क्याम्पेनमा अन्र्तगत ग्राहकहरुले १० रुपैयाँ देखि ५ हजार रुपैयाँ सम्मको टक टाइम जित्न सक्नेछन् । यो हप्ताको ५ हजार जित्ने भाग्यशाली बिजेताहरु तनहुका अभिषेक पन्त, बनेपाका रोशन मान्नधर तथा चाबहिलकी श्रृजना तामाङ, रहेका छन् ।
बिजेता मध्येका अभिषेक पन्तले आफ्नो अनुभब सुनाउँदै भने, ῝यो मेरो पहिलो जित हो । यस्तै खाले योजनामा भाग लिएर आजसम्म कहिल केहि जितेको थिईन, यो योजनामा जितेको ५ हजार सानो जित होइन । मैले महिना मा रिचार्जमा ४०० रुपैयाँ जति खर्च गर्ने गरेको छु, र यो जितेको ५००० ले त मेरो १ बर्षको रिचार्ज खर्च धान्नेछ । मेरो जितको यात्रा शुरु भएको छ, मलाइ बिश्वास जागेको छ कि म पनि लक्कि छु । धन्यबाद स्प्राइटलाई मलाई यो लक्कि मौका दिएकोमा ।῝
यो योजनामा सहभागी हुन ग्राहकले स्प्राइट, कोक तथा फ्यान्टा गरिद गरि बोटलमा भएको लेबलको पछाडी रहेको युनिक कोड टाइप गरि ३६७६८ मा एसएमएस गरेर सहभागी हुन सक्नेछन् । यो योजना भाद्र १५ गतेसम्म लागु हुनेछ । यो योजना ५०० एमएल, १लिटर, १।५लिटर र २।२५ लिटरका स्प्राइट, कोक तथा फ्यान्टाका बोतलमा लागु हुनेछ ।
नेपाली कांग्रेसले जितेका यी ५ वडामा पञ्जीकरणसम्बन्धी सबै सेवा नि:शुल्क !
ज्योति रेमिट सेवाका लागि ज्योति र देव बीच सम्झौता